गायिका पाठकको ‘ह्याप्पी होली’ बजारमा, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
गायिका पाठकको ‘ह्याप्पी होली’ बजारमा
काठमाडौं । फागु होली नजिकिएसँगै होलीका गीत संगीतहरु बजारमा आउन थालेका छन् । यहि क्रममा एउटा अर्को होलीको गीत बजारमा आएको छ ।
जसको बोल रहेको छ ‘ह्याप्पी होली’ । श्रीहरि दाहाल र सुशिला पाठकको आवाजमा रहेको यस गीतको भिडियो गायिकाको आफ्नै सुशिला पाठक नामक युट्यूव च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । गीतमा रुपेश बास्कोटाको शब्द र संगीत रहेको छ ।
समन अधिकारीले निर्देशन गरेको गीतको भिडियोलाई प्रमोद भण्डारीले कोरियोग्राफी गरेका छन् । टंक केसीले खिचेको गीतको भिडियोलाई शिलन लम्सालले सम्पादन गरेका छन् । गीतको भिडियोमा सुरेन्द्र बसेल फिचर्ड गरिएका छन् ।